ရယ်​လိုက်​ရင်​ အရမ်းကိုချစ်​စရာ​ကောင်းတဲ့ မင်းသမီး​ချော​လေး ပိုင်​ဖြိုးသုက​တော့ သရုပ်​​ဆောင်​ပိုင်းမှာလည်း ထူးချွန်​တာမို့ အကယ်​ဒမီဆုကြီးကို ပိုင်​ဆိုင်​ထားသူတစ်​ဦးပါ။ သူမက​တော့ လတ်​တ​လောမှာ အနည်းငယ်​ဝလာတာ​ကြောင့်​ စိတ်​ညစ်​​နေရတဲ့အ​ကြောင်းနဲ့ မင်္ဂလာ​တောင်​မ​ဆောင်​ရ​သေးတဲ့သူမကို နှမချင်းမစာမနာ မိန်းမချင်းမစာမနာ ဗိုက်​ကြီး​နေတာလားလို့ လာလာ​မေးကြတဲ့သူ​တွေ​ကြောင့်​ အသဲ​ပေါက်​​နေတဲ့အ​ကြောင်းကို ​လူမှုကွန်​ယက်​စာမျက်​နှာ​ပေါ်မှာ ​ရင်​ဖွင့်​​ပေးထားတာပါ။ ချစ်​ပရိသတ်​​တွေအတွက်​ ပိုင်​ဖြိုးသုရဲ့ခံစားချက်​စာသားတစ်​ချို့ကို ​ဖော်​ပြ​ပေးလိုက်​ပါတယ်​​နော်​။
တစ်​​နေ့တစ်​ခြား ပိုပိုပြီးလှလာတဲ့ ချစ်​စရာမင်းသမီး​လေး ပိုင်​ဖြိုးသု
ပိုင်​ဖြိုးသုက​တော့ “ဝမ်းနည်းစရာ အကောင်းဆုံးက ဘာလဲသိလား????အသက်အရွယ်အရ ဘာစားစားဝ ရေသောက်လည်းဝ နောက်ဆုံးလေရှူရင်တောင်ဝမှာစိုးလို့ ချွေတာရှူနေရတဲ့ဘဝဖြစ်နေတာပဲ……??? အဲ့မှာ ဘာကိုအသဲအပေါက်ဆုံးလဲသိလား?????ကွကိုယ်ဝလာလို့ depressed နေပါတယ်ဆိုမှ မင်္ဂလာတောင်မဆောင်ရသေးတာကို ဗိုက်ကြီးနေတာလားဟင်လို့ နှမချင်းမစာမနာ မိန်းမချင်းမစာမနာ လာလာမေးကြတဲ့လူတွေကိုပဲ……????နာဝလာလည်းနင်တို့ကျွေးထားရတာမဟုတ်ဘူး လို့ပြန်ပြောမိရင်စိတ်မဆိုးနဲ့….ဂယ်ဘဲ……” ဆိုပြီး စိတ်​တိုလွန်းစွာ ​ရေးသားထားတာပါ။
ပိုင်​ဖြိုးသုက​တော့ ပြီးခဲ့တဲ့ ဇွန်​လ ၂၁ရက်​​နေ့က ချစ်​ရသူနဲ့အတူ ​စေ့စပ်​ခဲ့တာဖြစ်​ပြီး မင်္ဂလာ​ဆောင်​ဖို့က​တော့ အ​ဝေးကြီးလို​သေးတယ်​လို့ သိရပါတယ်​။ ချစ်​ပရိသတ်​​တွေလည်း ​နှမချင်းမစာနာတဲ့ လူတစ်​ချို့​ကြောင့်​ စိတ်​ညစ်​သွားရှာတဲ့ ပိုင်​ဖြိုးသု​လေးကို အား​ပေးနှစ်​သိမ့်​တဲ့စကား​လေး​တွေ ​ပြောသွားခဲ့ပါဦး​နော်​။